Matipi ekugadzirisa stock yeecommerce zvakanaka | ECommerce nhau
Matipi ekugadzirisa stock yeecommerce zvinobudirira
ECommerce nhau | | Warehouse
Kana zvasvika pakutengesa pane zvimwe zvinhu zvinogona kuita mutsauko uye chimwe chazvo chigadzirwa chekuchengetedza. Teerera kune izvi matipi ekugadzirisa stock yeecommerce zvakanaka.
1 Kukosha kwekutarisira stock zvakanaka
1.1 Sarudza vatengesi vakavimbika uye vane mutoro
1.2 Ita chiyero chekutengesa
1.3 Seta yakakodzera nguva yekumisazve
1.4 Chengetedza huwandu hwekuchengetedza
1.5 Rongedza imba yekuchengetera "kubva pane zvakawanda kusvika kushoma"
1.6 Deredza nzvimbo yekugamuchira uye yekutumira
1.7 Ita shuwa kuti izvo zvinotumirwa zvasiya imba yekuchengetera uye kwete izvo zvichangosvika zvigadzirwa
1.8 Gadzira nzvimbo yemapakeji akagadzirira kutumira
1.9 Govera mabasa kuvashandi vakarovedzwa
Kukosha kwekutarisira stock zvakanaka
Kutengesa mune ecommerce kunoenderana nezvinhu zviviri zvakakosha: mutengo uye nguva yekuendesa. Yekutanga yavo inoenderana zvakanyanya nevavanokupa pane iwe pachako, asi yechipiri inogadziriswa neyakanaka kuzvidzora.
Nenzira imwecheteyo, kunyangwe iwe ukapa yakachipa pamutengo uye chitoro chako chepamhepo chinowana zviuru zvekushanyirwa, Kana usina chigadzirwa mudura rako, haugone kuchitengesa. Saizvozvo, kana iri mune yakashata mamiriro nekuda kwe kubata zvisina kukodzera Uye zvakare hazvizokwanisika kupedzisa iko kutengana, ndiko kukosha kwesitoko manejimendi.
Asi hazvisi izvo chete, nyanzvi dzezvehupfumi dzinovimbisa kuti izvo zvigadzirwa zvinoramba zviri mudura kweinopfuura mwedzi mitatu, kunyangwe zvikatengeswa mushure menguva iyoyo, inomiririra kurasikirwa nekuti ivo havabvumidze kudzoreredza izvo zvakaiswa mukutsvaga kwavo, kutakura, kubata, kuchengetedza uye kugovera. Sezvaungave iwe waona, zvakakosha kuti utarise zvese izvi zvinhu uye zvimwe zvimwe ku vimbisa zvakanaka manejimendi mune ecommerce, zvinotevera zvinogona kukubatsira kuti usapotsa chero chinhu.
Sarudza vatengesi vakavimbika uye vane mutoro
Sarudzo yevanopa vako inoenderana, kusvika padanho rakakura, pane iyo mhando yebasa iwe yaunogona kupa kune ako vatengi. Mune ino pfungwa, ive shuwa kusarudza iyo usambofa wakundikana kuendesa uye sangana nenguva dzakatarwa.
Ita chiyero chekutengesa
Paunenge uine imwe nguva mubhizinesi, unozviziva izvo zvimwe zvigadzirwa zvinotengesa zvakanyanya pane dzimwe nguva dzegore. Rudzi urwu rwemashoko runogona kushandiswa kune mukana wako kugovera stock yako zvine hungwaru.
Seta yakakodzera nguva yekumisazve
Iwe unofanirwa kuronga stock yako nekutsiva kwayo kuitira kuti ugamuchire nyowani nyowani zvisati zviripo zvaneta zvachose uye nenzira iyi kuona kuti iwe unogona kupa kune vatengi nguva dzese.
Chengetedza huwandu hwekuchengetedza
Yeimwe chigadzirwa uye kunyanya izvo zvinotengesa nekukurumidza, iwe unofanirwa kuve nekushomeka nechinangwa chekuti anowanikwa ari kutengeswa nepo imba yekuchengetera ichizadzwa nezvikamu zvitsva.
Rongedza imba yekuchengetera "kubva pane zvakawanda kusvika kushoma"
Izvo zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya zvinofanirwa kuwanikwa pedzisa kutengeserana nekukurumidza sezvazvinogona, nepo chishoma chakakumbirwa chinogona kuchengetwa mune imwe nzvimbo.
Deredza nzvimbo yekugamuchira uye yekutumira
Mudura iwe unogona kudzivirira kusagadzikana kana iwe ukanyatso kumisikidza nzvimbo iyo inotengeswa zvinhu zvitsva inogamuchirwa uye imwe iyo mairi inotumirwa.
Ita shuwa kuti izvo zvinotumirwa zvasiya imba yekuchengetera uye kwete izvo zvichangosvika zvigadzirwa
Kunyangwe pakutanga pekutaridzika kungaita senge kuri nyore kutora chigadzirwa chakakumbirwa kubva kune chitsva chinotengeswa ndokutumira, mukufamba kwenguva izvi zvichaita kuti zviome kubata anoshanda ekuverenga uye ichagadzira nyonganiso iwe yaunofarira kudzivirira.
Gadzira nzvimbo yemapakeji akagadzirira kutumira
Kurongeka ndiyo kiyi yekubudirira mune chero stock. Naizvozvo, panofanirwa kuve ne nzvimbo inoitirwa chete mapakeji ayo akagadzirwa kare uye vane zvese zvakakosha kuti vatumire ivo, kusanganisira ma invoice, kurongedza nezvimwe, kuitira kuti munhu ari kuendesa anongofanira kuvatora nekuvatora nekukasira kunzvimbo dzavanosvika.
Govera mabasa kuvashandi vakarovedzwa
Pakutanga unogona kuve nevashandi vashoma uye vanoverengeka vavo vanoita akawanda mabasa, asi mukufamba kwenguva iwe uchafanirwa kugadzira akasarudzika matimu ebasa mune mamwe mabasa kusimudzira kugadzirwa uye kugona.
Aya ndiwo mamwe emazano aunogona kuisa mukuita kune kunatsiridza kutonga kweecommerce stock yako. Kunyangwe kana iwe uchida kuisa software iyo inobatsira iwe kubata uye kuronga zvigadzirwa zvako, chinhu chakanakisa ndechekuti iwe ubate imwe nyanzvi kambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Logistics » Warehouse » Matipi ekugadzirisa stock yeecommerce zvinobudirira
Maitiro ekutengesa paWallapop